WhatsApp dia manomboka manaparitaka ny rafitry ny fitaovana marobe | Vaovao IPhone
WhatsApp dia manomboka manaparitaka ny rafitry ny fitaovana marobe
Ity dia, efa ary toa iray amin'ireo loza lehibe amin'ny WhatsApp, tsy manana rafitra fitaovana marobe toa ny ataon'izy ireo Telegram na Facebook Messenger, mamela anao hankafy ny serivisy fandefasan-kafatra na aiza na aiza fa tsy andevozina ny telefaoninao. Ary farany dia toa hiova ny zava-drehetra.
WhatsApp dia manomboka mamoaka ny serivisiny misy fitaovana marobe ho an'ireo mpampiasa izay afaka mampiasa ny sehatra fandefasan-kafatra nefa tsy mifandray. Tsy isalasalana fa ity dia iray amin'ireo fiasa andrasana indrindra amin'ny alàlan'ny mpampiasa rehetra amin'ny ankapobeny.
Amin'izao fotoana izao dia tsy ho an'ny mpampiasa ny WhatsApp beta ihany no misy azy io, na dia antenaina hahatratra ny mpampiasa rehetra ao anatin'ny andro vitsivitsy aza. Amin'ny ankapobeny, ny fandidiana dia mitovy amin'ny an'ny WhatsApp Web ary ny sisa amin'ireo fampiharana dia hihazakazaka amin'ny fomba mitovy. Ity fampiasa amin'ny dingana beta ity dia raisin'ireo mpampiasa Android indrindra, na dia fantatray aza fa haparitaka tanteraka amin'ny Operating Systems rehetra tsy misy avahana izany rehefa lasa ofisialy ilay fandefasana.
Na izany aza, ny rafitra dia manana fetra voafetra toy ny tsy ahafahanao mametraka chat amin'ny sehatra sasany, manatevin-daharana vondrona na mahita ny toerana amin'ny fotoana tena izy. Amin'izao fotoana izao, ny tena ataony dia ny mamerina ireo hafatra. Amin'izao fotoana izao dia fitaovana efatra ihany no azo ampifandraisina miaraka ary very tanteraka ny fiankinan-doha amin'ny telefaona finday.
Raha manana ny WhatsApp Beta ianao dia mandehana mankany amin'ny fizarana fampifandraisana fitaovana ary hiseho ny bokotra "Beta version ho an'ny fitaovana isan-karazany" Amin'ity tranga ity dia azonao atao ny misoratra anarana amin'ny beta ary ny fandidiana dia ho mandeha ho azy amin'ny fivoriana rehetra mifandray amin'ny kaontinao, eny, tsy maintsy averinao jerena indray ny kaody QR amin'izy rehetra. Mandritra izany fotoana izany, ao amin'ny iPhone News dia hiezaka hatrany izahay hanome torolàlana momba izany, miambena hatrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » WhatsApp dia manomboka manaparitaka ny rafitry ny fitaovana marobe
Ity dia ho sasany amin'ireo Emojis vaovao ho an'ny fitaovana iOS
Notsapainay ny tompon'ny iPad magnetin'i Lululook